अध्ययन भन्छः घाम तापेर पनि बच्न सकिन्छ क्यान्सर, डिप्रेसनबाट!
२३ मंसिर २०७६, काठमाडौं दिन–प्रतिदिन सबै मानिसको प्यारो ‘घाम’ बन्दैछ। किनभने, अहिले काठमाडौं लगायत सबै ठाउँमा चिसोको सुरुवात भइसकेको छ। त्यसैले अब हामीलाई घाम प्यारो लाग्ने समय पनि आएको छ।
२२ मंसिर २०७६, काठमाडौं मानिसहरु सम्बन्धलाई मुठ्ठीभित्र रहेको पुतलीसँग तुलना गर्छन्। मुठ्ठी बेस्सरी कस्नुभयो भने पुतली मर्छ। जुन मुठ्ठी खोल्नुभयो भने उडेर भाग्छ। त्यस्तै हो ‘सम्बन्ध’ पनि। एक–अर्कालाई केरकार बढी
२२ मंसिर २०७६, काठमाडौं एउटा सम्बन्ध जोगाउनको लागि जत्ति एक अर्काबीच प्रेम जरुरी छ त्यति नै जरुरी छ एक अर्कासँग नीजि पल विताउनु। जसमा शारीरिक सम्बन्ध राख्नु पनि सामान्य नै
स्कुटर बन्ने आशामा ७ घण्टासम्म बलात्कृत नर्सको कहानी!
२० मंसिर २०७६, काठमाडौं हैदराबादको एक टोल प्लाजामा २६ वर्षीया पशु चिकित्सक महिलाले आफ्नो स्टुकर पार्क गरेर आफ्नो कार्यमा निस्किन्। उनी आफ्नो कार्य सकेर फर्केर आउँदा उनको स्कुटर पन्चर भएको